सधैँ कुर्ता सुरुवालमा देखिने चर्चित डान्सर सपनामा आयो एकाएक यस्तो परिवर्तन, तस्विर भयो भाइरल ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुष २७, २०७५१२:२५0
बिग बोस फेम सपना चौधरी एकाएक परिवर्तन भएकी छिन्, उनको परिवर्तको कारण अहिले उनका फ्यानहरु अहिले निकै अचम्ममा परेका छन् ।
हरियाणीका स्टार डान्सर रहेकी सपनामा शोबाट बाहिर निस्केपछि उनको तौल घटेको हो । सपनालाई देसी क्वीन भनेर पनि चिनिन्छ ।
भखरै इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेको तस्विरले उनलाई ग्ल्यामरस देखिएको छ । इन्स्टाग्राममा उनले फाटोसुट गराएको तस्विर सेयर गरेकी हुन् । तस्विरमा उनको फेसलाई एक्सेसरीजले कभर गरिएको देखिन्छ । उक्त तस्विरमा लुक्सलाई निकै युनिक देखिएको छ ।
बिग बोसबाट उनको चर्चा चुलएको हो । सन् २०१८ गुगलमा सबैभन्दा बढि नाम सर्च गर्ने सेलिबे्रटी लिस्टमा उनी तेस्रो नम्बरमा परेकी हुन् । पहिलेको तुलनामा निकै स्लिम देखिकी सपनालाई फिल्ममा काम गर्नको लागी पनि अफर आएको छ । उनले भोजपुरी र हिन्दी गीतमा डान्स पनि गरिसकेकी छिन्
सपना बिगबोस कन्टेसटेन्ट बन्नु भन्दा पहिले एक सेलिब्रेटी थिइन् । खासगरी उनी कुर्ता सरुवाल र एथनिकमा देखापर्थिन्, अहिले उनको लुक्सको कारणले गर्दा उनका फ्यानहरुलाई अझै इम्पे्रशन पार्न उनी सफल भएकी छिन् ।
मनिषा कोइरालाको जिन्दगीका उतारचढाव, २० जनासँग प्रेम सम्बन्ध, एक डिभोर्स !
आज आमिर खानको जन्मदिन, यी हुन् उनका ५ हिरोइन जसले उनीसंग पर्दामा आगो लगाए
किन गरिन् करिनाले शाहिदलाई छोडेर १० वर्ष जेठा सैफसँग विवाह ? यस्तो छ कारण